Ma ogtahay in dumarku ay 6 maalmood oo keliya uur qaadi karaan? | Raganimo University
Ma ogtahay in dumarku ay 6 maalmood oo keliya uur qaadi karaan?
February 11, 20192 minutes
Haddii aad tihiin lamaane doonaya in ay iska ilaaliyaan uurka ama doonaya in ay gabadhu uur yeelato waxaa muhiim ah in aad wax ka ogthay waqtiyada ay u badantahay in gacalisadaada ay uur qaado. Inta lagu guda jiro wareega waqtiga u dhexeeya caadada, dumarku waxay uur qaadi karaan 6 maalmood oo keliya.
Qaasatan waxay dumarku uur qaadi karaan 5-ta maalmood ee ka horeysa bacriminta ugxaanta iyo 1 maalin ee ka dambeysa. Sababta ayaa ah in biyaha raggu ay ku dhex-noolaan karaan gabadha 5 maalmood oo keliya. Iyadoo haddii aad isku galmootaan 5 maalin ka hor waqtiga ay ugxaantu bacrinta tahay ay wali jirkeeda ku jidho biyihii ninka.
Hadaba si gabadhu ay u ogaato waqtiga ay ugu haboontahay in ay uur qaado waxaa muhiim ah in ay la socoto waqtiga ay ugxaanteedu bacrinto. Sida loo xisaabiyo ayaa ah in gabadhu ay tiriso maalmaha u dhexeeya waqtiga caadadu ku dhacdo.
Dumarka isku celcelis waqtiga u dhexeeya labada caado waa 28 maalmood. Balse gabadh kasta waa ka duwantahay kuwa kale, oo qaarkood kuwa ugu gaaban waa 21 maalmood, halka qaar kale ay sugayaan 35 maalmood ama tirada u dhaxaysa.
Tusaale, haddii gabadha ay caado ku dhacdo 28 maalmood ka dib midii hore, waxay ugxaanteedu bacrimaysaa maalinta 14 ama 16-aad. Sidaa daraadeed 5-ta maalmood ee ka horeeya maalmahaas iyo maalinta ka dambeysa ayay u badantahay in gabadhu uur qaado. Laakiin waqtigaan waa isbedali karaa dumarka kala duwan. Haddii gabadha ay caadadu ku dhacdo waqti isku mid ah markasta way fududahay in lala socdo xisaabtaan. Oo xitaa waxaa jira barnaamijko moobeelka aad ku shuban karto oo lagula socon karo. Balse haddii ay isbedal badantahay waqtiga caadadu ku dhacdo gabadha arintu way adkaaneysaa. '
Haddii aad tihiin lamaane doonaya in ay iska ilaaliyaan uurka, waa in aad ka fogaataan galmada maalmaha ay gabadhu bacrinta tahay. Balse ogoow in ay markasta qatar jirto oo gabadhu ay uur qaadi karto waqti kala duwan maadaama dumarka qaar ay isbedal badantahay waqtiga ay caadadu ku dhacdo.